Kufanotaura: Bhizinesi Rako Richava E-commerce Bhizinesi | Martech Zone
Wakamboona yedu ichangoburwa saiti? Zvinotonyanya kushamisa. Takashanda mukugadzira uye kusimudzira kwebhuku redu kwemwedzi inodarika mitanhatu uye handigone kukuudza nguva yatakashandisa. Nyaya yacho yaingove yekuti hatina kukwanisa kukurumidza zvakakwana zvekupedzisa nekukasira zvakakwana. Mune mawonero angu, chero munhu anovaka dingindira kubva pakutanga nhasi ari kuita zvisizvo kubhizinesi ravari kushanda navo.
Ini ndakakwanisa kubuda ndoshandisa $ 59 pane yedhijitari yemagazini theme, Akavaka dingindira retsika yekubatanidzwa kwetsika yedu, akashandura ganda rekumusoro kwetimu, uye ini ndanga ndichisimuka ndichimhanya mukati mevhiki. Tichiri kuzoburitsa kumwe kubatanidza, sePodcast yedu uye raibhurari reWhite Paper, asi iwe ungazoshamiswa nezvakauya nemusoro wenyaya.
Chimwe chinhu chaive chekufanirwa ndechekuti chakauya nacho WooCommerce zvakanyatsobatanidzwa. Woo, pamwe neayo madingindira uye enjini yekutengesa, yaive ichangotengwa neAutoattic - iyo kambani ine yavo WordPress. Mune maonero angu ekuzvininipisa, ndinotenda ichi chisarudzo chakajeka. Sei? Nekuti ini ndinofungidzira kuti yega yega kambani - ingave B2B kuenda kuB2C - ichave nechimwe chikamu chekuzvishandira-kuraira kuburikidza newebhu.
Vatengesi uye ecommerce makambani vatove mairi. Imwe ngoma inorira pa IRCE muChicago yaive yekuti zvaive zvisiri zvekutengesa kuchitoro chako pane yako saiti. Izvo zvaive zvekutengesa kuburikidza neumwe neumwe chitoro pane yega yega saiti. Vatengesi vadiki vane masisitimu ehurongwa, zvemukati masisitimu, uye masystem ekuzadzisa anovabvumidza kuti vatengese muzvitoro zvakawanda pamhepo padivi pechavo.
Icho chokwadi ndechekuti vatengi (uye mabhizinesi) vanosvika pakuvimba saiti yavanotenga kubva. Kana iwe uri kutenga kuAmazon kazhinji, iwe hausi kuzotenga aftermarket pasi mateti kubva kune mumwe mukomana paInternet. Asi kana murume iyeye ari paInternet ari kutengesa matare ake epasi paAmazon futi, iwe uchavatenga.
Uri kutotadza kutengesa online
Ndisati ndananga kuChicago, ndakawana email kubva Nationwide inishuwarenzi yandaida kubhadhara mari yangu yemota. Ini ndakapinda muaccount yangu, ndikatadza kuwana nzira yekubhadhara mari. Ndakadzokera kubasa ndikafunga kuti ndaizofonera mumiriri wangu mushure. Mazuva mashoma gare gare, ndakagamuchira imwe ziviso yekuti inishuwarenzi yangu yaizopera kunze kwekunge ndabhadhara mari yangu. Ini ndakapinda ndikaedza zvakare kusabatsira - handina kana kuwana bhadhara mari yangu bhatani pane yavo nyowani yakachena interface. Ini ndakaisa chiyeuchidzo kufonera mumiriri wangu.
Zuva rakatevera, ndakaenda kubasa ndikabatikana uye handina kumbofonera mumiriri wangu. Pandakasvika kumba, chokwadi pakanga paine email yekuti inishuwarenzi yangu yaizopera usiku ihwohwo pakati pehusiku nekuti ndakanga ndisina kubhadhara mari yangu. Hazvina kunaka… ndanga ndichityaira kuenda kuChicago zuva raitevera uye ndanga ndisiri kuzove ndisina inishuwarenzi.
Saka ndakabhenekesa bhurawuza rangu kuenda pa Geico. Mushure memaminetsi mashoma, ini ndakagamuchira chaiyo-nguva quote uye yakanaka mafuta bhatani kutenga mutemo. Ini ndakadzvanya bhatani uye rikati vaizove vachinditumira mamwe mapepa kuburikidza netsamba uye kana ndichinge ndaizadza, mutemo wangu unenge uri wekurarama. Unofanirwa kunge uchindiseka.
Zvadaro - budiriro. Ini ndakapinza ruzivo rwangu uye vakafanotungamira ruzivo rwemota yangu kwandiri nemwanasikana wangu. Mamwe mashoma akadhinda gare gare uye ini ndaive nemutemo mutsva uye kiredhiti kadhi yekuisa mumotokari yangu. Zvakatora maminetsi gumi ... uye ini chaizvo akaita Chengetedza mari. Izvi zvakandishamisa sezvo ndanga ndiine Nyika yose kweanopfuura makore makumi maviri.
Nyika yese yakandirasa nekuda kweinishuwarenzi yayo? Kwete, ini handina basa neinishuwarenzi yavo uye ndaifarira mumiriri wangu. Vakandirasa nekuda kwekuti ndaisakwanisa kuzvishandira pamhepo.
Bhizinesi rako uye bhizinesi rangu harina kusiyana. Saiti yedu nyowani ine hunyanzvi hwekutengesa inokwanisa uye isu tinotanga kutengesa zvese zvigadzirwa nemasevhisi akananga kune vedu vaverengi. Ini handina mubvunzo kuti uyu uchave uri kukura mari yemubhadharo kwatiri kuenda kumberi uye kuti maoko-pane agency sevhisi yatiri kupa iye zvino vatengi vazhinji vachadzikira zvishoma nezvishoma.
Ini handina basa kana uchicheka huswa kana kurambana - sekungofungirwa kwakaitwa vanhu kuti kambani yega yega ichave muparidzi, kufungidzira kwangu ndekwekuti kambani yega yega ichave neecommerce saiti munguva pfupi kwete!
Tags: auto inishuwarenzi onlineotomatikie-zvokutengeseranaecommercegeicoinishuwarenzimunyika yoseonline insurancekurongeka kwepamhepopaIndaneti chitorobudirirowoowoocommercewoothemes
Chii chinonzi Programmatic Kushambadzira & Kushambadzira?